Munaasabad Fund-Rising Qalab-Caafimaad Loogu iibinayo Isbitaalka Kismaayo oo Ka Dhacday Minniapolise. - Cakaara News
Munaasabad Fund-Rising Qalab-Caafimaad Loogu iibinayo Isbitaalka Kismaayo oo Ka Dhacday Minniapolise.
Minniapolise(CN)Xaflad si sare loosoo agaasimay oo lacag loogu aruurinayay isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo ayaa ka dhacay magaalada Minneapolis ee Cariga Maraykanka iyadoona ay Isku Dubaridka iyo Qabanqaabada xaflada ay soo agaasimeen hay’ada Gargaarka ee Magaceedu yahay SEWD-Foundation oo ay xaruntooda tahay gobolka Minnesota. Waxaa xaflada kasoo qeyb galay qaar ka mid ah madaxda jaaliya, aqoonyahano, iyo waxgarad. Waxaa lasoo bandhigay sawiro muujinayay baahida isbitaalka.
Waxaa dadka la tusay sawiro dad xanuunsan oo ku jira isbitaalka. Hay’ada SEWD oo ay Askumeen Labada gabdhood ee Magacyadoodu kala Yihiin Fowsiya Cali iyo Canab Cali ayaa uu Hindisahooda ugu wayn ee Fund Risingkan uu yahay in ay isbitaalka Kismaayo u iibiyaan Qalab-Caafimaad iyo daawooyin.
Warka ayaa intaa ku daraya in Hay’ada SOMCARE oo uu saldhigoodu yahay Minnesota ayaa ka qeyb qaadaneysa barnaamijka qalabka loogu gadayo isbitaalka. Fowsiya Ali oo ah madaxa ururka iyo Anab Ali oo ah ku xigeenkeeda ayaa ka hadlay xaflada. Waxay ka hadleen baahida isbitaalka iyo sida loogu baahan yahay in Soomaalida Minnesota ay ka qeyb qaataan iibinta qalabka uu isbitaalka u baahan yahay.
Waxay tilmaameen in hay’adooda aysan ku koobnayn deegaan kaliya balse ay ka shaqeyn doonto meel walba oo ay dhibaato ka jirto,iyagoona hada ka hor Dugsiga Hooyga oyo Waxbarashada Agoonta DDSI iyo Wasaarada Caafimaadka DDSI ku soo caawiyay Qalabyo isugu jira Kuwa Waxbarashada iyo Caafimaadka.
F.G;-Haddii aad dooneyso in aad ka qeyb qaadato mashruucan dadka lagu caawinayo Si Dhibyar ula hadal Iyagaa kuu Diyaaree Cinwaanadan Gudoomiyaha SEWD Fowsiya 952. 688-8608 ama G/Xigeenka Hay'ada SEWD Anab Ali 952. 261-4215.